Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Noma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade ulokhu wethembeke kakhulu, ungithanda kakhulu, kodwa uhlushwa ukugula, ubumpofu, kanye nokushiywa abangani nezihlobo zakho, noma uma ubekezelela noma yimaphi amanye amashwa ekuphileni, ingabe ukwethembeka kwakho nokungithanda kwakho kusazoqhubeka?” (“Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ngizizwa ngingeneme neze—umuzwa othile wosizi uyangisibekela ngaphakathi bese inhliziyo yami izwakalisa isikhalo sayo esingenaphimbo: Nkulunkulu Wami othandekayo, ungavumela kanjani ukuba labo abathembekile Kuwena futhi abakuthandayo bahlangabezane namashwa anjena? Ngenxa yalokho, ngibe nenkinga kakhulu yokuqonda incazelo yomfowethu ovela ngenhla owathi, “Imfuno yokugcina eyafunwa nguNkulunkulu kumuntu ukuba abe nothando futhi nobuqotho.”
Kamuva, ngafunda indima elandelayo ekuhlanganyeleni kwabantu: “Inombolo 5: ‘Uma kade ulokhu wethembeke kakhulu, ungithanda kakhulu, kodwa uhlushwa ukugula, ubumpofu, kanye nokushiywa abangani nezihlobo zakho, noma uma ubekezelela noma yimaphi amanye amashwa ekuphileni, ingabe ukwethembeka kwakho nokungithanda kwakho kusazoqhubeka?’ (“Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Lesi sidingo asiyiso isivivinyo esincane esintwini. … Ukwethembeka nokuthanda uNkulunkulu kwakhelwe phezu kwasiphi isisekelo? Kungakhonjiswa kanjani ukuthi umuntu ngempela unokwethembeka kuNkulunkulu? Kungakhonjiswa kanjani ukuthi umuntu unalo ngempela uthando lukaNkulunkulu? Lokhu kudinga ukuqinisekiswa ngokuvivinywa nokucwengisiswa. … Lapho uhlangana nalolu hlobo lokuvivinywa, inhloso yokuqala kaNkulunkulu ukukuveza ukuze abone ukuthi ukuthi ukwethembeka nothando lwakho kuyiqiniso yini. Inhloso yakhe yesibili ukukuhlanza, ngoba kukhona ukungcola ekwethembekeni nasothandweni lwakho. Uma ukwazi lokhu kungcola, okwambulwayo lapho uhlangana nokuvivinywa okunhlobonhlobo, khona-ke kuyohlanzwa kuwe. Uma abantu benokwethembeka nothando lweqiniso kuNkulunkulu, khona-ke ngisho bangehlelwa yini futhi noma bangahlangana naluphi uhlobo lokuvivinywa, ngeke bawe, kodwa kunalokho bayoqhubeka bathembeke futhi babe nothando kuNkulunkulu ngaphandle kokungabaza. Kulabo abanokwethembeka nothando okunokungcola nesifiso sokuzuza okuthile njengomvuzo, ngeke kube lula ukuma baqine lapho izivivinyo zehlela kubo, futhi bayoba sengcupheni yokuwa. Abantu abanjalo bayokwambulwa kalula, ngeke kube njalo?” “Singasindiswa Kuphela Ngokwanelisa Izidingo Zokugcina ZikaNkulunkulu” embhalweni othi Izintshumayelo Nokuhlanganyela II). Kungemva kokufunda le ndima kuphela yokuhlanganyela nabazalwane lapho ngabona khona ukuthi selokhu ngangehlulela umsebenzi kaNkulunkulu ngokucabanga kwami kwenyama. Ngakholwa ngokuyiphutha ukuthi uthando lukaNkulunkulu luhamba nezipho eziningi zomusa nesiqiniseko senjabulo yenyama nokuthula. Angikaze ngicabange ukuthi ukuhlupheka kuyindlela yesibusiso sikaNkulunkulu. Kungemva kokubona lesi sehlakalo sikadadewethu, lapho ngabona khona ukuthi ukucwengwa ngokuhlushwa ngukubonakaliswa koqobo kothando lukaNkulunkulu. UNkulunkulu udala izimo ezithile bese eletha amashwa phezu kwabantu Bakhe—ingabe ngokugula emzimbeni, izinkinga zezimali, noma nanoma yiziphi ezinye izinkinga—hhayi ngenhloso embi kodwa ngenxa yothando Lwakhe nomusa. Ukuze abhekane nenkohlakalo nokusilela komuntu, uNkulunkulu udala zonke izinhlobo zezimo zokumlinga nokumcwenga. Usebenza ngalokhu kuhlupheka ukuze ahlanze, aguqule futhi anikeze impilo kumuntu. Yize noma inyama yomuntu kufanele ibhekane nobunzima obukhulu kulo mgudu wokucwengwa, okungabukwa njengebhadi noma izinto ezimbi, izinhloso nemibono emibi, izifiso ezingenamqondo, nezinjongo ezingalungile zokufuna umuntu anazo ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu ukuze azazi, futhi abe nobudlelwane obusondele kobujwayelekile ukuze akwazi ukutshala nokukhuthaza uthando lukaNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Imihlomulo enjengaleyo ayitholakali ngokuba nempilo elula nemnandi. Lapho umuntu esezitholile izifundo ezivela ekuhlushweni yizilingo zakhe bese ebukisisa emuva endleleni ayihambile, ekugcineni uyaqonda ukuthi izahlulelo zikaNkulunkulu nokusola, ukushaya Kwakhe kanye nokulungisa konke kwakufakwe uthando lukaNkulunkulu olungenamkhawulo. Uthando lukaNkulunkulu alukhona nje kuphela ukondla nokuba nesihawu. Akuve kumayelena nokupha izinto eziphathekayo kuphela, kodwa futhi nokucwenga okubanga usizi, ukushaya nokulungisa.
Okwedlule: Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke